Tenga Shea Butter Mask Kunyorovesa & Kuderera Pores Kurara Kumeso Mask - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
Shea Butter Mask Kunyorovesa & Kuderera Pores Kurara Chiso Mask
Shea Butter Mask Kunyorovesa & Kuderera Pores Kurara Chiso Mask yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Shandisa: Chiso chese
Feature: Kuchenesa, Kudzora, Oiri-kudzora, Kudzika Kudzokorora
Item Rudzi: Kurapa & Mask
Muenzaniso Nhamba: 87321
Chitupa Nhamba: 2017000001
Chigadzirwa zita: Chiso mask
Zvimiro: Zvinovaka muviri, Hydrating, Moisturizing, Oiri Kudzora, Kupenya
Kuwanda: 8pcs / bhokisi
Iyi masiki yekudyara inogona kubvisa zvakasarudzika tsvina nemafuta akawandisa mu pores.
Unogona kuchenesa kumeso kumeso.
Ita kuti ganda rijekeswe uye rive rakachena, uku uchipa ganda mvura yakawanda yekupa kudya.
Kusimudzira ganda remvura nemafuta pachiyero kumeso ganda, uye gadzira pore kusangana, ganda rakabatanidzwa uye rakajeka.
Inobatsira kuvandudza kuoma kweganda.
Kukwevera pasi uye kuchenesa kumeso kwako nechenesi kutanga. Wobva watora chiyero chakakodzera chechigadzirwa ichi zvakaenzanisirwa kumeso kwako (kunze kwemaziso nemuromo). Gara kwemaminetsi makumi maviri nemakumi matatu, kana tsvina nemafuta pachiso zvaburitswa, shandisa mbichana nyoro nyoro kana chipanji kuzora mask yemadhaka.
Taura 2-3 nguva pasvondo. Iwe unogona zvakare kugadzirisa iyo frequency yekushandisa zvinoenderana neyako kumeso zvido.
Ndapota edza kushandisa chigadzirwa ichi panzeve kumashure kweganda. Kana paine chero chisina kujairika kuita kana kusagadzikana, ndapota rega kushandisa.
Ndokumbirawo uise chigadzirwa ichi pasi penzvimbo yakaoma uye inotonhorera, uye dzivisa kupisa kwakanyanya uye zuva rakananga.
1 bhokisi Chiso kumeso
Kubva paongororo dze 77
Kutonhorera mask nekuchenesa maitiro !!! Kwete mafuta, akarairwa kechipiri. Chaizvoizvo kurudzira !!!
Mask akanaka ndatenda